du Antivirus ကိုလုံခြုံရေး - Applock & Privacy Guard ကို APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » du Antivirus ကိုလုံခြုံရေး - Applock & Privacy Guard ကို
du Antivirus ကိုလုံခြုံရေး - Applock & Privacy Guard ကို APK ကို
100% အခမဲ့ antivirus ကိုနှင့် Pro ကိုတိမ်တိုက်နည်းပညာအားဖြင့် Powered က Android device များအတွက်မိုဘိုင်းလုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်! du Antivirus ကိုတစ်ဦးအခမဲ့-to-ဒေါင်းလုပ် antivirus ကိုဗိုင်းရပ်စ်ခြိမ်းခြောက်မှုအမျိုးမျိုးမှသင်၏ဖုန်းများနှင့် pads ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုကူညီ app ကိုအဖြစ်သင့်ရဲ့ privacy နဲ့သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖြစ်ပါတယ်။du Antivirus ကိုသော့ချက် features တွေ
►ဗိုင်းရပ်စ်များ, malware, spyware နဲ့ Trojan များစကင်ဖတ် - နောက်ဆုံးပေါ် antivirus ကိုဒေတာဘေ့စတွေနဲ့
အန်းဒရွိုက်ဖုန်းများ & tablet များထံမှ►အလိုအလျောက်ဗိုင်းရပ်စ် detection နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေး
►သင့်ရဲ့အားနည်းချက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်, spyware ကနေကာကွယ်ပါ
AppLock ကျူးကျော် Selfie ►
►ဖိုင် Locker အတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဓာတ်ပုံများ & ဗီဒီယိုများ Hide
►သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အစာရှောင်ခြင်းကိုစီမံခန့်ခွဲ & သင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု Hide
► Block ကိုမလိုချင်တဲ့ spam များကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု (ဒီ function ကို user က data တွေကိုစုဆောင်းမထားဘူး)
အဘယ်ကြောင့်ဒူ Antivirus ကို Download လုပ်?
★ဆုကို-အနိုင်ရ Antivirus ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
du Antivirus ကို 2016, ဂျာမနီအခြေစိုက်အိုင်တီလုံခြုံရေးနှင့် antivirus ကိုသုတေသနများ၏နယ်ပယ်များတွင်ဦးဆောင်နိုင်ငံတကာနှင့်လွတ်လပ်သောဝန်ဆောင်မှုပေးအတွက် AV စနစ်-TEST ကနေချီးမြှင့် "Android အတွက်အကောင်းဆုံး antivirus ဆော့ဖ်ဝဲ" ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ မိုဃ်းတိမ်ကို antivirus ကိုအင်ဂျင်အားဖြင့် Powered, ဒူ Antivirus ကိုစူပါအစာရှောင်ခြင်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့် malware detection စနစ်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ချက်ချင်းခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်အခြား spyware တွေရဲ့ဖယ်ရှားလိုက်ပါ!
★ဒါဟာ 100% အခမဲ့ဖွင့်
du Antivirus ကိုလုံးဝအခမဲ့ထိပ်ဆုံးလူတန်းစားလုံခြုံရေးကာကွယ်မှုပေးသည်!
du Antivirus ကိုသင်သည်သင်၏ဆုံးရှုံးသွားသောဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုတွေ့ပါကူညီပေးသည်။ ဒီအကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး tool ကိုသင်၏ဖုန်းသို့မဆိုသူခိုးကိုချိုးဖောက်၏ရုပ်ပုံလက်သည်နှင့်သင်အဝေးမှ device ကိုတခုတခုအပေါ်မှာနှိုးဆော်သံကိုဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
★ဗီဒီယို & ဓာတ်ပုံ Vault
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။ du Antivirus ကိုလုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက် privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်နဲ့ဝိသေသလက္ခဏာခိုးယူဆန့်ကျင်သငျသညျခုခံကာကွယ်။ သငျသညျ, သင့်ဓါတ်ပုံကိုပြခန်း, ပုဂ္ဂလိကဗီဒီယိုများနှင့်ပုံများ, အဆက်အသွယ်များ, ဟက်ကာများအနေဖြင့်ပုဂ္ဂလိကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖုံးကွယ်သင့်ရဲ့အားနည်းချက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ပေးရန်နှင့်ဖိုင်ကို Locker သို့သူတို့ကိုငါထားနိုင်ပါတယ်။
★ password ကို & ပုံစံသော့ခတ်နှင့်သင်၏ app ကိုသော့ခတ်
အဆိုပါ AppLock အင်္ဂါရပ်ကိုအလွယ်တကူ Facebook မှာ, Whatsapp, ပြခန်း, Messenger ကို, Snapchat, Instagram ကို Gmail, Musical.ly တော်ဝင်ထိပ်တိုက်တွေ့ခြင်းနှင့်သင်ရွေးချယ်မည်သည့် apps များ & ဂိမ်းများကိုသော့ခတ်နိုင်ပါ။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်တားဆီးနှင့် privacy ကိုစောင့်ရှောက်။
ဖုန်းလုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်ကို Android Device များပေါ်တွင်မလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့ဖို့ကိရိယာတခုလည်းပါဝင်သည်။ သငျသညျလွတ်လပ်စွာ, အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် filtering ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေသတ်မှတ်ထားအနက်ရောင်စာရင်းမလိုလားသောအဆက်အသွယ် add နှင့် Non-ဂဏန်းနံပါတ်များကိုကနေ spam များကို detect နိုင်ပါတယ်။ ဒီ tool ကမှသာဖုန်းခေါ် blocker အဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်မည်သည့်လမ်းအတွက် user data ကိုစုဆောင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူ privacy ကိုထိခိုက်စေမထားဘူး။
Android အတွက်ဒူ Antivirus ကို Internet Security ၏မီးမောင်းထိုးပြထားသည်
✔ 100% အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင်: ဆုရ antivirus ကိုအင်ဂျင်စွမ်းအားဖြင့်ချွေ malware များ & spyware တွေရဲ့ဖယ်ရှားရေးနှင့် antivirus ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
✔ Worldwide ၏လူကြိုက်များ: ကမ္ဘာတဝှမ်း 25 သန်းအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြု။
✔မြန်ဗိုင်းရပ်စ်စကင်နာ: ဒူ Antivirus ကိုအခြားအ paid ဆန့်ကျင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသန့်စင်ထက်အများကြီးပိုမြန်သည်မိုဃ်းတိမ်ကိုနည်းပညာများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
✔ AppLock & Vault: မျက်စိ prying မှသင်၏ပုဂ္ဂလိက apps များ, ပြခန်းနှင့်ဂိမ်းများသော့ခတ်ခြင်းနှင့်မလိုချင်တဲ့ app များကို / ဂိမ်းများကိုဝယ်ယူရာမှသင်တို့၏သားသမီးတားဆီး
✔ Clear ကိုဖုန်းကကက်ရှ် & အတွက် Junk Files
✔အသေးစားဖိုင်အရွယ်အစား: 10MB ထက်လျော့နည်း
encryption ကိုကိစ္စများ, အားနည်း password များနှင့်အခြားအန္တရာယ်တွေ✔ Scan ကို Wi-Fi ကွန်ရက်များ
အဘို့နောက်ဆုံးပေါ်မိုဘိုင်းလုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး updates များကိုတွေ့မြင်:
တရားဝင် developer က်ဘ်ဆိုက်: http://www.duapps.com/product/du-antivirus.html
တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာ: https://www.facebook.com/duapps/
du Antivirus ကို du Group မှ, Android App များ၏ဦးစီးရေးသားသူကတီထွင်နေသည်, တီထွင်လူများ 850 သန်းပေါင်းများစွာကခံစားဖြစ်ကြောင်းကို Android device များအတွက် State-Of-The-Art app များကိုဖန်တီး!
du Antivirus ကိုလုံခြုံရေးသည်အလွန်ယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်၏ privacy နဲ့လုံခြုံရေးကိုလေးစားပါသည်။ ကျနော်တို့ပြဿနာပြီးသားပြေလည်ခဲ့ပြီးသောငါတို့သည်အသုံးပြုသူများစိတ်ချချင်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အသုံးပြုသူများအား၎င်းတို့၏ဒေတာရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးအပြည့်အဝယုံကြည်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ Android ထုတ်ကုန်ကာကွယ်ဆက်လက်ကြိုဆိုပါတယ်။
1 ။ စွမ်းဆောင်ရည် optimized နှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်။
2 ။ bug fixed ။
du Antivirus ကိုလုံခြုံရေး - Applock & Privacy Guard ကို
10.03 ကို MB
du လုံခြုံရေး Lab မှ (Antivirus ကိုလူသတ်သမားနှင့်သန့်စင်)
purnachandra muduli says:
စက်တင်ဘာလ 1, 2017 မှာ 10: 49 နံနက်
ကောင်းတဲ့ app ကို
Satyajit Biswas says:
နိုဝင်ဘာလ 1, 2016 မှာ 7: 38 နံနက်
ဂရိတ် app ကို ... .thanks